China Steam Uye Rotary Retort fekitori uye vagadziri | Dingtaisheng
Isa chigadzirwa mune yekudzvinyirira kudzikisira, masirinda akamanikidzwa uye kuvhara mukova. Musuwo wekudzorera unochengetedzwa nekupindirana katatu kwekuchengetedza. Mukufamba kwese, musuwo wakakiiwa.
Iyo sterilization maitiro anoitwa otomatiki zvinoenderana neresipi yekuisa kune iyo micro-kugadzira controller PLC.
Mvura inopisa inoiswa mukati mekutenderera kuburikidza netangi remvura inopisa, mweya unotonhorera unodzoserwa, ipapo mweya unobayiwa pamusoro penzvimbo yekupinza, iyo yekupfungaira uye iyo drainage inowirirana, uye nzvimbo iri mukutsiva izere nemhepo. Mushure mekunge yese mvura inopisa yaburitswa, inoenderera ichidziya kumusoro kuti isvike kune yekudzivirira kutonhora. Iko hakuna inotonhorera nzvimbo mune yese mbichana maitiro. Mushure mekunge nguva yekuvharisa yasvika, mvura inotonhorera yakapinda uye inotonhorera nhanho, uye kumanikidza kuri kudzoka kunodzorwa zvine musoro panguva yekutonhora kuona kuti magaba haazoremedzwe nekuda kwemusiyano uripakati pekumanikidza kwemukati nekunze.
Mukupisa uye kubata danho, kumanikidza kuri kudzosera kumashure kunoitwa nekuzadza kwemhepo. Kana iyo tembiricha yadzikiswa, pakaunda kumanikidzwa kunogadzirwa kuti uve nechokwadi chekuti chigadzirwa kurongedza hakuzoremara.
Munguva yese iyi maitiro, kutenderera kumhanya uye nenguva yemuviri unotenderera unotsanangurwa neiyo sterilization maitiro echigadzirwa.
Yunifomu kupisa yekuparadzira
Nokubvisa mweya mumudziyo wekutsiva, chinangwa chekuzadza hwemvura sterilization chinoitwa. Naizvozvo, pakupera kwekuuya-up vent chikamu, iyo tembiricha iri mumudziyo inosvika kune yakaenzana mamiriro.
Tevedzera FDA / USDA certification
DTS yakasangana nehunyanzvi hwekuongorora kwekupisa uye inhengo ye IFTPS muUnited States. Inoshandira pamwe zvizere neDAA-inogamuchirwa yechitatu-bato yekushisa inosimbisa vamiririri. Chiitiko chevatengi vazhinji veNorth America chakaita kuti DTS izive nezve FDA / USDA zvinodzora zvinodiwa uye yekucheka-kumucheto sterilization tekinoroji.
Zvakareruka uye zvakavimbika
Zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzekuvharisa, hapana imwe nzira yekupisa yekuuya-uye yekudzivirira chikamu, saka chete chiutsi chinoda kudzorwa kuita kuti batch yezvigadzirwa zvienderane. FDA yakatsanangura magadzirirwo uye mashandiro eiyo steam retort zvakadzama, uye mazhinji ekare macanneries anga achishandisa iyo, saka vatengi vanoziva musimboti unoshanda werudzi urwu rwekudzosa, zvichiita kuti rudzi urwu rwekutsiva rive nyore kune vashandisi vekare kuti vagamuchire.
Iyo inotenderera sisitimu ine yakapusa dhizaini uye yakagadzikana kuita
> Muviri unotenderera unogadzirwa uye kuumbwa panguva, uye kurapwa kwakaringana kunoitwa kuti uve nechokwadi chekutenderera kwekutenderera
> Iyo roller system inoshandisa yekunze mashandiro seyese kugadzirisa. Chimiro chiri nyore, chiri nyore kuchengetedza, uye chinowedzera zvakanyanya hupenyu hwebasa.
> Iyo yekutsikirira sisitimu inotora mbiri-nzira masirinda kuti otomatiki apatsanure uye compact, uye giraidhi dhizaini inosimbiswa kuti iwedzere hupenyu hwesevhisi yeiyo humburumbira.
Keyword: Rotary kudzosera, kudzosera, Sterilziation yekugadzira mutsara
Zvinwiwa (mapuroteni emuriwo, tii, kofi)
Products Zvigadzirwa zvemukaka
＞ Muriwo nemichero (howa, miriwo, bhinzi)
Food Chikafu chevacheche
＞ Yakagadzirira-kudya-chikafu, Porridge
Food Chikafu chemhuka dzinovaraidza
Pashure: Kunyudzwa Kwemvura Uye Rotary Retort
Zvadaro: Vertical Crateless Retort Sisitimu
Mhepo Rotary Retort
Mhepo Rotary Retorts
Kunyudzwa Kwemvura Rotary Autoclave Retort
Mvura Rotary Kunyudza Kudzikisira